Diksionera "Vitasoa" indray mihelatra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mahatratra 3,7 kg ny lanjany ary azo an-tsaina amin’izany koa ny lanjan’ny ao anatiny. Misy pejy 1 600 ary ahitana teny iditra 53 239: maneho hevitra 77 319 sy dikan-teny 134 838, mirakitra fanazavana 221 998 amin’ny teny malagasy sy ohatra 59 195 amin’ny teny frantsay voadika amin’ny malagasy koa. Fa anisan’ny tena mampiavaka azy ireo andalan-teny raikitra na “locution” miisa 5 602 sy ny filaza an’ireo amin’ny tenintsika. Eo koa ny tableau de conjugaison amin’ny antsipiriany.
Rabenilaina Roger Bruno sy Morin Jean-Yves no mpanoratra fototra. Profesora akademisianina iry voalohany, mpampianatra-mpikaroka eny amin’ny Oniversite. Profesora kanadianina, mpahay momba ny teny kosa ity faharoa. Fa fifarimbonan’olona maro no nahatontosana azy ity, ary fianakaviamben’ny samy mpandala ny malagasy no sady mpampianatra mpikaroka eny amin’ny Oniversite avokoa. Anisan’izany : Andrianierenana Clément Luc, “maître de conférence”, Razanamanana Marie Jeanne, profesora, akademisianina; Raharinirina Rabaovololona Razanajohany Lucie, profesora , akademisianina; Ralalaoherivony Baholisoa Simone, profesora; Ranaivoson Jeannot Fils, “maître de conférence”, akademisianina. Tao koa ireo mompera zezoita izay niara-niasa tamin’ireo : Béthaz Giustino sy Rakotonandratoniarivo Guillaume de Saint Pierre.
Vitasoa, nadika avy amin’ny hoe “Departement interdisciplinaire de formation professionnelle” na DIFP ka nanome ny hoe : “Vinanin-taranja sy ofana amin’ny asa”, araka ny hita ao amin’ny sasin-teny.
Ny nahatontosana azy : vokatry ny fiaraha-miasa tamina mpiara-miombona antoka avy any ivelany toa ny Conférence épiscopale italienne (CEI), ny Service de cooperation et d’action culturelle (SCAC) eo anivon’ny ambasadin’i Frantsa ao Antananarivo. Fa teo koa ny eto an-toerana : ny DIFP, ny Fakiolten’ny teny aman-tsoratra sy siantsan’ny maha olona (FLSH).
Efa ela no niketrehana azy ity. Ny taona 1998 no nanomboka ny fiaraha-miasa tamin’ny Profesora Morin, fa efa nisy ny asa betsaka nataon’ireo zoky teo aloha hatramin’ny andron’i profesora Siméon Rajaona. Fanohizana izany no natao. Nanomboka ny taona 2007 kosa ny fandaminana sy fanaraha-maso ary fandavorariana sy fampidirana an-takila azy. Mbola ho avy ny fotoana hamelabelaran’ireo vy nahitana sy angady nanana ity Vitasoa ity. Santionany roa ihany manko no mbola tonga eto amin’ny Nosy, hatramin’ny faramparan’ny volana apirily teo. Afaka volana vitsy no hahatongavan’ny sisa, dia ireo Vitasoa 4 000 natonta tany Italia.